Matos fangalana sary
maboule le Mar 30 Mar - 15:26
mba mila ny avis ny eclairé e fa misalasala be e ! reny bridge reny ve misy mba azo debrayer na ihany, sa misy compact azo avadika manuel ny reglage .manomboka mianatra maka sary sy mba te hiditra lalindalina zany, misy reflex argentique iany ato fa mahakivy be ny miandry le izy voasasa vo hita ny effet ny zavatra nikitihana. reflex numérique to tsy ho takatra ny vidiny hatreto, le bridge otran ny vomanga be zany ny fijeriko azy ety ivelany
Re: Matos fangalana sary
jaha le Ven 2 Avr - 14:18
Za kou mba tena mirevy sary ka dia mba mahafaly ahy ny miteny izay azoko anampiana. Misy compact efa mba somary avancé ireny manana reglage manuel saingy tsy fantatro hoe manao ahoana ny résultat-ny. Bridge aloha mazava hoazy fa tsara kokoa noho ilay compact avancé. Ny avantage be hitako ho an'ny bridge dia ilay zoom tonga dia mahatoraka hatrany @ grand angle ka hatrany @ téléobjectif (18 hatrany @ 400mm any) tsy mila mividy zoom manokana hafa. Ny ahy izao aloha reflex entrée de gamme fa mba misy ianarana milalao tsara aloha, any aoriana any vao mi-invest rehefa manana traikefa.
Afaka anombohana tsara ny bridge raha ny hevitro.
Poumpouny le Ven 2 Avr - 16:06
Za indray anefa de miteny hoe lafo loatra ny bridge (eo am manomboka 500 000 Ar eo raha eto) raha miaritra kely anefa ka tena mitady le bande mandeha chine ireny de mety ahita reflex entéé de gamme genre Canon 1000D na Nikkon D3000 ireny eo am 800 000 Ar boitier nu, de mety hoe na 1 000 000 Ar ohatra de mahazo miaraka am objo standard ohatra hoe 18-55 na otran'izany. Za izany mahita hoe interessant raha tena hanao photo tokoa ny tonga de manomboka reflex noho ny hoe hividy bridge 500 000 Ar de avy eo afaka 2 ans mahazo fafiny de zay vo hividy reflex, nefa tahak'izay tonga de nividy reflex (izay ny boitier aloha amiko de plutot accessoire fa ny objo no tena mitondra azy) De avy eo rehefa tafiditra tsara ao anatin'ilay fafiny am le sary de objo fotsiny no vidiana.
Tsy haiko aloha ehh,eritreritro fotsiny izay